Ingiriiska Oo Qashinka Jiddadka Iyo Faras-Magaalaha Lagu Qubaa Halakaysay | Hawraar
Ingiriiska Oo Qashinka Jiddadka Iyo Faras-Magaalaha Lagu Qubaa Halakaysay
Dhibaatadda ka taagan Qashinka iyo qaabka loo qubo iyo waliba fool xumadiisa jidadka iyo meelaha faras magaaluhu, kaliya maaha mushkilad ka jirta uun Somaliland, hasa yeeshee waxay fadeexadaasi ahayd mid bilihii u danbeeyay soo noq noqonaysay meelo kala gadisan iyo dallal kala duwan oo Yurub ahna ka taagnayd.
Haddaba waxa dhawaan wasaaradda warbixin ay soo saartay wasaarada degaanka, cuntada iyo horumarinta reer Miyiga Ingiriisku soo saartay lagu sheegay in fool xumada qashinku noqotay mid la daristay shacbi waynaha Ingiriiska, taas oo inteeda baddan si xilkasnimo daro ah loogu daadiyo jidadka iyadoo la adeegsanayo gawaadhi oo inta baco laga soo buuxiyo loogu tuuro meelaha jiddadka iyo farasmagaalaha ah.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in 60% qashinka dalkaas lagu daadiyo jiddadka iyo meelaha faras magaalayaasha ah. Fadeexad xashiishka ee dalka Ingiriiska ayaa soo baxaysa xili dallalka Talyaaniga iyo Faransiiska ay hadheeyeen fadeexado ka dhashay gudaafadaha iyo meelaha qashinka lagu qubo oo yaraaday ama la awoodi waayay in si haboon loo daboolo, waxa kale oo sii kordhay qashinka lagu daadsho jidadka iyo meelaha ugu bilicda wacan magaalooyinka.
Inkastoo mudo dheer qaarada Yurub iyo dadka reer galbeedku ku faani jireen, faya dhawr wanaagsan iyo bilic saraysa oo magaalooyinkooda waaweyn ka jirta isla markaana fool xumada iyo qashinka ku soo sawiri jireen caasimadaha Afrika waxa imika muuqata in arintu noqotay food saar, daba saar loo celi.
Dawladaha dallalka reer Yurub ugu magaca dheer uguna qadiimisan ayaa ku doodaya in arintan tahay mid si aan ku talo gal ahayn u dhacday, oo si deg deg ah wax looga qaban doono.
Inkastoo sida dadka arimaha dallalkaa ka faaloodaa tilmaameen ay jirto kala duwanaan dhinaca dhaqaalaha iyo sida wax looga qabanayo fadeexadan ama loo xalinayaa ay jirto hadana waxa muuqata in is badal wayni ku dhacay shacbiga dallalkaas, loona fasiran karo arintan hor dhac dhaqan guur ku yimi mushtamacaadkaas, gaar ahaan dadka Ingiriiska oo iyagu ah kuwo aad u jecel inay kor u qaadaan bilicda iyo magaca dalkooda.